Guddiga Dhaqaalaha Wadajirka Ah Ee Turkiga Iyo Soomaaliya Oo Yeeshay Kulan-koodii Labaad | allsanaag
Guddiga Dhaqaalaha Wadajirka Ah Ee Turkiga Iyo Soomaaliya Oo Yeeshay Kulan-koodii Labaad
Shirka labaad ee Guddiga dhaqaalaha wadajirka ah ee dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, ayaa looga hadlay Iskaashiga dhaqaalaha laba dhinaclaha ah ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo dhaqan gelinta heshiisyadii hore iyo ka faa’iideysiga fursadaha jira.
Soomaaliya waxaa shirka uga qayb gelay wafdi heer wasiir ah oo horumuud uu u yahay wasiirka Qorshaynta maal-gashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, dhanka Turkiga-na waxaa uga qeyb galay wafdi kale oo wasiirka difaacu uu hoggaaminayo.
Shirka oo dhacay 30-31 October 2019 ayaa maalintii hore waxaa isugu yimid guddiyada farsamada ee labada dhinac.
kulanka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay horumarradii dhaqaale ee la gaaray iyo xariirrada dhaqaale, ganacsi, farsamo, dhaqan ee ka dhexeeya labada dowladood, waxaana la isla qiray in ay muhiim tahay in lasii adkeeyo iskaashiga
Shirka waxaa dhinac socday shir doceedyo wasiirradu ay la yeesheen wasiirrada dhiggooda ah ee dalka Turkiga.
Guddiga wadajirka ah ee dhaqaalaha Turkiga iyo Soomaaliya oo lagu aasaasay qodobka 7aad ee heshiiskii ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada dowladood saxiixeen 22, 02, 2016, ayaa kulankii ugu horreeyay waxa ay January 11-12, 2018 ku yeesheen isla magaalada Ankara.
Labada dowladood ayaa horay u kala saxiixday heshiisyo iyo is-afgaradyo ay dani ugu jirto labada dal iyo labada shacab.
← Waa Wax aan Soconeeyn Qabyaaladdii oo meel xun ka maraysa SNM →